Akwụkwọ Bhitarkanika Tourism Packages | Kpọọ anyị na: 993.702.7574
Ogige National Park nke Bhitarkanika bụ mba nke abụọ kachasị ukwuu na India. Pebbles Sand Njem nlegharị anya Bhitarkanika ga-eme ka ị nwee ahụmahụ mara mma nke ala mmiri. Ala ahịhịa na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nnụnụ na-agafe agagharị na nduru, crocodiles ndị na-atụ egwu mmiri, mmiri mmiri na-eme ka mmiri dị jụụ, nke dị jụụ gburugburu nke nnụnụ na nke anụ ọkụkụ, na-adọta ndị ọbịa nke dị nso ma dị anya ịzụ ìgwè ndị a dị mkpa . Ndị ọkà mmụta sayensị, ndị ọkà mmụta, ndị na-ahụ maka ndị njem na ndị njem na-enwe nri dị ukwuu maka iche echiche na nyocha. Bhitarkanika Tourism na-ekpuchi akụkụ nile nke njem. Ebe a na-anọchite anya otu n'ime ihe kachasị mma mgbe niile. Bhitarkanika bụ ebe obibi pụrụ iche nke Mangrove Forest nke jupụtara n'ọtụtụ mmiri na apịtị dị na district Kendrapara nke Odisha. Otu n'ime ụlọ ọrụ nchịkwa nke Mangrove nke ukwuu na India, Bhitarkanika bụ ebe obibi dị iche iche na ugbo. Na Sand Pebbles Bhitarkanika Nlekọta njem ị nwere ike ịnweta njem ị na-achọ. Di iche iche di iche-iche di iche iche na-adọta ndi mmadu n'apata aka. Bhitarkanika National Park bụ ebe dị elu nke catophoop Leopard, cat cat, cat ọhịa, hyena, boar ọhịa, nwa anụ ọhịa, sambar, pigcupine, dolphin, crocodile saltwater tinyere agụrị ọcha, anụ ọhịa, eze eze, mmiri nlekota mmiri, , woodpecker, hornbill, geese na-ebu isi, Brahmani ọbọgwụ, ọkpụkpụ, na-acha ọcha-bellied ugo, tern, mmiri mmiri, mmiri na ọtụtụ dịgasị iche iche nke obibi na nnụnụ nnụnụ. Ya mere, n'atụbeghị ọganihu, buru akpa gị maka njem nleta a na Sand Pebbles Bhitarkanika Tourism.
Ebee Ka I Nọrọ: Sand Pebbles Bhitarkanika Jungle Resorts na Bhitarkanika National Park na-enye ụlọ ace-class ulo na ebe dị mma maka ịnọ abalị.
- 14 SWISS TENTS (Iri Abụọ, Iri Atọ, Iri Na-Ekere Iri).
Ezigbo ụlọ (Non-AC) na Switzerland Tents na AP na atụmatụ MAP.
Sand Pebbles Bhitarkanika Jungle Resorts na-enye ndokwa nchịkọta dị mma maka ndị njem nleta - ma site n'ụlọ na ná mba ọzọ.
Ọnụ ọnụ efu:Tarif Ụlọ: na INR: Kwa abalị Emere site na 01st Aug 2018 ka 31st July 2019.
Enweghị SW SW-TENT
nri ụtụtụ + (nri ehihie ma ọ bụ nri abalị) nri ụtụtụ + nri ehihie + nri abalị
Ugboro abụọ 5,800 6,900
Ọnụ ọgụgụ niile gụnyere ụtụ isi. (Isiokwu iji gbanwee n'ọdịnihu).
Ụmụaka nọ n'okpuru afọ 5 dị n'efu.
Ntinye akwukwo di n'okpuru nnweta.
Ebe obibi Switzerland-Tent na Sand Pebbles Bhitarkanika Jungle Resorts (Bhitarkanika National Park).
National Park nke Bhitarkanika Na-anọchi anya site na 01st Mee ruo 31st July maka Izuzu na Nesting nke ebe obibi na-emeghere maka njem nleta site na 01st August ọ bụla n'afọ.
Ọnụ ọgụgụ dị n'elu adịghị na ya maka Saturday. Nchịkọta ọzọ nwere ike ịbụ maka ntinye akwụkwọ.
Pịa ebe a Maka Ntube / Nwepu Nwepu.
1 am ederede ngọngọ. Pịa edit button ịgbanwe a ederede. Home iPhone anọdụ email gị gaghị bipụtara, consectetur adipiscing elit. Ut elit elit, luctus nec ullamcorper mattis, dapibus Leo pulvinar.
Ọrụ na Ọrụ: Ngwá ọkụ na-arụ ọrụ, Nri oriri na ihe oriri, Hammocks (Swings), Na-akụ azụ, (Mmiri), 24-awa mmiri, Gbakwunyere ime ụlọ ịwụ, Ebe ọkụ, 24-awa Eletrik na nzụlite Generator, Omuma Ọrụ Amụma, Lively Rejuvenating Atmosphere , Ntụrụndụ na-enweghị ntụpọ, Ntụkọta / Gbasaa ntinye site na ntinye ụgbọ elu (naanị ibute / nbanye)
Ihe na Ọrụ enyere: Ezigbo ụlọ, Ezigbo nri na-edozi ahụ, Ọkụ ụgbọ mmiri, ọkụ ọkụ, iwe, ihe gbasara ụlọ ọrụ, imekọ ọnụ, ọpụpụ, ọrụ owuwu ụlọ na mmebe ezumike, ntụrụndụ nke isiokwu.
Ebe ndi isi: Nnụnụ nke 170 ụdị dịgasị iche iche, 08 nnukwu ụdị nke Kingfishers, Open Billed Stork, Sea Eagles, Kites, Sand Pipers, Darters, Whistling Teals, Sea Gulls, 22-ụkwụ Crocodile (Kaalia), nke White White (Gauri), Basking Crocodiles na Mudflat, Ezigbo Eke, Ala ọhịa, Nyochaa Lizard, Eze Cobra, Pythons
Ihe Ntinye: Khola na Gupti bụ isi ihe ntinye abanye na National Park nke Bhitarkanika. Ndị ọbịa ga-enwerịrị ikikere ntinye site n'Ọhịa Forest Check na okporo ụlọ Khola na Gupti Dept. Private Boats dị na ebe abụọ ahụ. Ejikwa ụgbọ mmiri ndị ọzọ na JAYANAGAR & CHANDBALI. Ihe ntinye abanye na obodo ndi isi Odisha.
Site na okporo ụzọ:
Bhubaneswar - 160 KMS ka ị banye na Khola / Gupti
Cuttack - 140 KMS ka ị banye na Khola / Gupti
Bhadrak - 70 KMs ka ị banye na Jayanagar Via Chandbali
Ọdụ okporo ígwè kacha nso:
Site na Bhadrak - 70 KMs ka Jayanagar abanye
Site na Cuttack - 140 KMs ka ị banye na olulu / Gupti
Site na Bhubaneswar - 160 KMs si na nbanye nke Khola / Gupti
Airport kacha nso: Bhubaneswar